Allende Sy Pinochet, Fampitahàna Mampizara Ny Shiliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 22 Septambra 2013 13:12 GMT
Vakio amin'ny teny English, বাংলা, Ελληνικά, Español
Andro mafy ho an'ny Shiliana ny 11 Septambra isan-taona– Fa tena nampiady hevitra ity faha-40 taonan'ny coup d'état (fanonganam-panjakana) izay nampianjera an'i Salvador Allende ity. Manamarika ny fisalasalàna ny amin'ny fitantànan'i Sebastián Piñera, ilay filoham-pirenena voalohany avy amin'ny hery ankavanana taorian'ny fiverenana amin'ny demokrasia tamin'ny taona 80 ity datim-pahatsiarovana eo anivon'ny taom-pifidianana ity. Ny fampielezan-kevitra sy ireo fahatsiarovana tsy miova no niteraka indray ny adihevitra momba ny fitondran'i Salvador Allende sy ny fandovàna ny jadon'i Augusto Pinochet, manasongadina fa mbola iainana mandraka ankehitriny ny fizarazaràna eo amin'ny samy Shiliana.
@hectortitolopez Isaorana i Pinochet afaka mihinana ianao, miaina, ary manao zavatra an-kalalahana fa tsy voatery hilahatra sakafo….. afaka hatramin'ny mibitsika ihany koa aza ianao
Tena iray volana nialoha ny fanonganam-panjakana nataon'ny tafika no nanendren'ny tena #Allende an'i #Pinochet ho lohan'ny FFAA
Amin'ny lohateny nataony “Allende sy Pinochet” [es], i Emilio Antileff, poety dia nitantara ny fifandraisana mifanohitra – sy mifameno- amin'ny tendron'ireo endrika roa eo amin'ny tantaran'i Shilia ireo ary raha alefa lavidavitra kokoa dia ny fampitahàna azy roa ireo :
Na dia izany aza, ny vokatry ny fikomiana miaraka amin'ny fitenenana hoe: ” Ny kamarady (namana) Filoha” dia milaza fitantanana iray izay ahitàna ireo tsy fitontaliana sy halemen-tsaina amin'ny fitarihana mifanohitra amin'ny fanintonan'ny filohan'ny UP [Unidad Popular, ny fiaraha-mitantana amin'ny hery ankavia izay nahatonga an'i Allende ho ao anatin'ny governemanta]. Ny hamaroan'ireo nofinofy voazimbazimba sy ireo talenta teo ambany fifehezan'i Allende no tany nahavokatra ho an'ny firaisana tsikombakomba, toy ny nanafoanana ny fitantànana difotry ny foto-kevitra, nefa miaraka amin'ny fahafahana mitantana ahitam-bokatra izay tsy mifanaraka amin'ny hevitr'Atoa Allende.
Nandritra ny resadresaka tao amin'ny fandaharana Zero Tolerance ( Tsy misy fandeferana)-n'ny fahitalavitra tamin'ny Alahady 9 Septambra teo, nanao fanambarana maro sy jery todika momba izany fotoana izany i Alberto Cardemil [es], Sekretera lefitry ny Atitany tamin'ny fitondran'i Pinochet. Nanao tsilian-tsofina momba izany i Profitador, mpibitsika sady mpandalina fiaraha-monina (sosiology) :
Misy ihany koa ireo mitsikera ny fiziriziriana amin'ny fampiasàna ny lasa amin'ny adihevitra politika ankehitriny. Ny filohan'ny hery ankavia taloha sady mpilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena amin'izao fotoana izao Michelle Bachelet no nambaran'i Angel Rodriguez sy Pato Cuevas amin'izany :